Create_AP: Script hizarana ny fifandraisanay amin'ny WiFi | Avy amin'ny Linux
Toy izao manaraka izao ny toe-javatra: Manana Laptop misy fifandraisana Internet izahay ary te hizara izany fifandraisana izany hampiasa ny Smartphone na Tablet amin'ny alàlan'ny WiFi.
Raha ny mahazatra mba hahatratrarana izany dia tokony hamorona fifandraisana WiFi isika, avy eo mampiasa IPTables ho an'ny NAT, sns ... Fa mpampiasa ny ArchLinux namorona script ianao, izay notononinao anarana Mamorona_AP ary manao izany rehetra izany ho antsika.
Ity script ity dia mampiasa de hostapd + dnsmasq + iptables mamorona a point de acceso NAT, ary hostapd + brctl + dhclient mamorona a Access Point. Ny fihetsika tsy mandeha Is a fidirana amin'ny alàlan'ny NAT.
1 Fametrahana_Fametrahana _AP:
2 Fampiasana script
Mba hametrahana Create_AP izay ataontsika dia manokatra terminal ary apetraho:
$ git clone https://github.com/oblique/create_ap $ cd mamorona_ap $ sudo manamboatra
Toy izany koa, afaka mihazakazaka .sh fotsiny isika izay ho ao anatin'ny fampirimana. Raha te hiasa tsara dia tsy maintsy apetraka eto ambany ireto fiankinan-doha ireto:
bash (hampandeha ny script)
util-linux (ho an'ny getopt)
# Tsy misy teny miafina (tambajotra misokatra):
# WPA + WPA2 misy teny miafina:
# AP tsy misy Internet zaraina:
# Bridge Bridge miaraka amin'ny Internet zaraina:
Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny fampiasana an'ity script ity ao amin'ny rakitra README.md. Hanombohana ny serivisy ampiasainay tsotra izao amin'ny console:
Ary hanombohana azy ho azy:
Ho ahy manokana, ny Script miasa ho ahy tanteraka, afaka mampifandray ny ZTE Open amin'ny Laptop amin'ny alàlan'ny WiFi aho fa tsy nahita fomba hifandraisana amin'ny Internet. Mety ho fahadisoan'ny FirefoxOS ny tsy fananany safidy mametraka Proxy na zavatra toa izany, tsy haiko, fa tsara raha mizara ny zavatra niainanao aminay ianao raha toa ka mety aminao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Create_AP: Script hizarana ny fifandraisana Internet amin'ny alàlan'ny WiFi
Izy io dia miasa amin'ny Ubuntu / Debian ????
Raha ny tena izy dia mieritreritra aho, ary raha tsy mieritreritra aho fa azo ovaina 😉 heveriko fa amin'ity tranga ity dia ny fananana fiankinan-doha ilaina no zava-dehibe.
Voamarina tao amin'i Debian Jessie, sangan'asa ny script.
Saingy afaka nampiasa Internet tamin'ny findainao ve ianao?
Eny, saingy manana Android aho miaraka amin'ny MIUI izay mitondra ny fanohanana Proxy tafiditra.
Misintona ny Debian Jessie netinstall ISO ao amin'ny 3, 2, 1 ...
Tena tsara. Ilaina ny zavatra toy izany. Izaho dia efa hamorona fonosana Gentoo ho anao hizaha toetra anao.
Ankasitrahana izany 😀
Tongasoa ianao 😉 Heveriko fa tokony hisaotra ny mpanoratra azy indrindra izahay.
Vonona. Ity ny fandaharako Gentoo. create_ap dia ao anaty Wireless-Wireless.
Ary mazava ho azy, toy ny fanao amin'ny Arch Linux, dia efa ao AUR 😀 https://aur.archlinux.org/packages/create_ap
yaourt -S mamorona_ap
Ahoana ny fomba fampandehanana ny ap ap amin'ny arch
Mamaly an'i bocono
Soso-kevitra tsara. Tsy fantatro fa afaka mizara ilay tambajotra avy amin'ny PC amin'ny WiFi ianao.
Na izany na tsy izany dia hiasa amin'ny netbook-ko izany.
Nanandrana azy niaraka tamin'i Kademar aho (64 bit) izay Arch ary niasa ho ahy izy io, taty aoriana dia hizaha azy amin'ny Internet aho miaraka amin'i Kademar (32bit), saingy heveriko fa hataoko avy any AUR izay efa eo.
Raha ny tokony ho izy, dia nanararaotra nanolotra an'ity fizarana ity aho, te hampiasa Arch foana aho saingy sarotra ny fametrahana azy sy ny fomba fampiasana azy saingy noho ny nataon'i Kademar dia nataon'izy ireo nilamina izany ary mora ny mametraka, mampiasa ary manavao azy.
Afaka mahita fampahalalana vitsivitsy eto ianao ary tsara ho fantatra ny hevitra manosika anao:
rpayanm dia hoy izy:
Niasa tonga lafatra tamiko tao amin'ny ubuntu 14.04 aho, mila nametraka fiankinan-doha very (hostapd) fotsiny aho !!!
Rehefa nila nanao an'io aho dia tsy maintsy nandeha tany amin'ny Windows ary nihazakazaka Connectify. Ankehitriny dia ataoko amin'ny Linux !!!
Misaotra betsaka xD
Mamaly an'i rpayanm
Fandraisana anjara tena tsara, misaotra betsaka anao nizara izany taminay !! Tena ilaina tokoa, tamin'ny voalohany tsy dia nahaliana ahy ny fizarana wifi, nieritreritra aho hoe: fa .. raha mifandray amin'ny wifi ny laptop, ahoana ny fomba hizarana wifi? Saingy lavo aho fa ny tianao holazaina dia hoe mifandray amin'ny Modem USB na modem fotsiny, dia misy dikany hahaha
Misaotra betsaka tamin'ity fandraisana anjara ity!
Tsy azoko ihany koa, mandra-pamakiako ny hevitrao 😀
¿ dia hoy izy:
Inona avy ireo fonosana tokony hesorina tsy hanana fifandraisana Internet?
Miasa tsara ny zava-drehetra ao amin'ny Ubuntu 14.04. Misaotra anao.
ERROR: Angamba ny adaptatera WiFi anao dia tsy manohana tanteraka ny interface virtual. Andramo indray miaraka amin'i –no-virt.
ary raha manampy –no-virt
Tsy mahita fitaovana «wlan0»
amin'ny Fedora 20 miaraka amin'ny gnome 3.12
Izany dia satria tany Fedora dia tsy tokony wlan0 ny interface WiFi, izany dia teo aloha .. hahafantarana ny anaran'ny interface-nao andramo miaraka:
Ny ahy dia anarana lava be tamin'ny F19 ary ankehitriny amin'ny F20 dia em1 izy.
Kuroro dia hoy izy:
Salama, niasa ho ahy tamim-pahombiazana ny Script nataonao tao amin'ny Fedora 20 x64 - Gnome. Misaotra indrindra anao! . Fa manana olana aho izao: tsy afaka mifandray amin'ny tamba-jotra aho, tsy misy mahafantatra ahy izy ireo, inona araka ny eritreritrao no lesoka?
Mamaly an'i Kuroro
Nisy zavatra nokasihinao tao amin'ny /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf marina?
Mametraha marika pound (#) fotsiny eo alohan'ireo tsipika nampianao.
Tsy dia nikitika fanahafana mihitsy aho, mihazakazaka fotsiny ny script ary rehefa manidy ny terminal dia efa nahafantatra ireo tambajotra. Ampianaro aho fa tsy afaka mifandray amin'ny Internet avy amin'ny Fedora 🙁
... ary rehefa nikatona ny terminal aho dia tsy nahalala intsony ireo tambajotra
Amin'ny alàlan'ny terminal fotsiny no ahitako ireo tambajotra, saingy tsy azoko atao amin'ny interface interface Imagen
Salama, lazaiko anao fa ny fizarana internet amin'ny telefaona na takelaka dia azo atao mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fedora 20 kde, mankany amin'ny mpampanonta fifandraisana avy eo hanampy, misafidy tsy mifampizara Wireless, ao amin'ny fantsom-pifandraisana Wireless misafidy ny hamerana ny tambajotra ilay fitaovana izay tian'izy ireo halefa ny fambara hizarana sy voila, dia efa manana Internet amin'ny telefaona finday na tablette rehetra izy ireo. Manantena aho fa manampy anao izany!
moa dia hoy izy:
azonao atao ve ny manampy ahy, azoko ity lesoka manaraka ity rehefa mihazakazaka create_ap wlan0 eth0 MyAccessPoint MyPassword
ERROR: ny adaptatera anao dia tsy mety ho gara (izany hoe ampifandraiso) sy AP amin'ny fotoana iray ihany
Mamaly an'i moa
Salama, vaovao aho amin'ity ary raha manandrana ny andalana
$ sudo manamboatra
Fidiko ity hafatra ity «tsy ao anaty rakitra sudoers»
… Ao amin'ny Fedora 21 gnome kinova 3.14
Tsy maintsy ampidirinao ao amin'ny vondrona kodiarana ny mpampiasa anao, na apetraho ao amin'ny fisie / etc / sudoers ity manaraka ity:
Mazava ho azy, mieritreritra ny anaranao dia ivan.
Lavorary daholo. Fa miandry IP DHCP izy ary tsy mifandray mihitsy
Manana ny fonosana ilaina rehetra napetraka ve ianao? Vakio ny rakitra README na zavatra toy izany
Nanandrana nampiasa an'ity script ity tamin'ny modem USB-ko (Huawei E353) aho ary tsy nety tamiko. Azoko ilay hafatra hoe "ERROR: Angamba ny adaptatera WiFi-nao dia tsy manohana tanteraka ireo interface virtoaly. Andramo indray miaraka amin'i –no-virt. ». Heveriko fa olana maodely izany, nandany ny atoandro atoandro tao an-tranon-neny aho nanao izany ary tsy afaka xD
TOfriki dia hoy izy:
ity rohy ity dia manazava ny fomba anaovana azy tsy misy script
Valio amin'i TOfriki
Salama, miasa amin'ny tetikasako farany ASIR aho ary mila mamorona teboka fidirana Wi-Fi, noho izany dia nahasarika ny saiko ity lahatsoratra ity.
Voalohany indrindra, ny fanazavana tena tsara, saingy manana olana aho ary io no mahazo an'ity lesoka manaraka ity rehefa manandrana mamorona tetezana misy tambajotra amin'ny Internet zaraina aho:
root @ pablo-Aspire-5741G: / home / pablo / create_ap # create_ap -m tetezana wlan0 eth0 Tetikasa farany ho an'ny tetikasa farany
TANDREMO: Ny adapter anao dia tsy manohana tanteraka ny interface virtoaly AP, ahafahanao –no-virt
Nahita ny Network Manager, nametraka wlan0 ho fitaovana tsy tantanana… VITA
Fizarana Internet amin'ny fampiasana fomba: tetezana
Mamorona interface interface… br5 noforonina.
interface interface-command-line: hostapd_cli -p /tmp/create_ap.wlan0.conf.DgNR09hJ/hostapd_ctrl
Rakitra fikirakirana: /tmp/create_ap.wlan0.conf.DgNR09hJ/hostapd.conf
Tsy nahomby tamin'ny famoronana interface mon.wlan0: -23 (Betsaka ny fisokafana fisie amin'ny rafitra)
Miezaha manala sy mamorona indray ny mon.wlan0
Tsy nahomby tamin'ny fanavaozana ny isa napetraka tao amin'ny maodelin'ny kernel
Mampiasa interface wlan0 miaraka amin'ny hwaddr f0: 7b: cb: 16: 52: cc ary ny "Projet Final"
Mikasika ny tsipika farany, teo aloha aho dia nanandrana nanamboatra azy io tamin'ny tanana tsy nametraka na inona na inona tao amin'ny interface wlan fa tsy mandeha izany, noho izany dia nesoriko izy io, na izany aza dia toa mbola misy ihany.
Afaka manome tariby ahy ve ny olona? Misaotra anao…!
jesusguevarautomotriz dia hoy izy:
Mahafinaritra ity fa niasa lavorary ho ahy tao amin'ny Lubuntu 15.04.
Hatramin'ny nahitako ny Conectify tao amin'ny Windows dia nanandrana nitady vahaolana mitovy amin'ny linux aho mandraka androany rehefa hitako ity lahatsoratra ity, heveriko fa tokony hiparitaka be kokoa ity.
Ahoana ny fomba hahitako ireo mpanjifa mifandray? Ny IP sy manara-maso azy ireo amin'ny ankapobeny?
Mamaly an'i jesusguevarautomotriz
Salama, napetrako tamin'ny antsipiriany daholo ny zava-drehetra ary avy eo nihazakazaka aho ary niasa tanteraka, ny hany zavatra tsy maintsy ho hitako dia ny fomba fampandehanana azy rehefa manodina ny pc aho satria tsy mandeha amiko ilay ampahany. Misaotra ny fizarana.
cristiand391 dia hoy izy:
Salama, ao amin'ny Xubuntu 14.04 aho, miaraka amin'ny tariby ethernet ary niasa nandritra ny andro vitsivitsy ity script ity, noforoniko ny AP sy ny finday Android mifandray tsy misy olana amin'ny Internet. Nanana olana tamin'ny Internet aho nandritra ny 10 herinandro teo, nifandray tamin'ny tamba-jotra ny telefaona saingy miadana be (1 na 4kb / s) ny hafainganam-pandeha raha oharina amin'ny teo aloha (5 na 400kb / s), misy mahalala ny olana?
Manazava aho fa manana ilay hostapd Saucy aho satria miaraka amin'i Trusty dia tsy misy fomba hamoronana AP.
Mamaly an'i cristiand391
tolotra dia hoy izy:
Raha hizara amin'ny WI-FI ka hatramin'ny WI-FI dia ilaina ny manana karatra tambajotra tsy misy tariby roa, ohatra ny iray izay tafiditra ao anaty solosaina finday ary iray hafa ampifandraisin'i Usb. Avy eo dia toa toa izao ny baiko:
Mamaly an'i ofer
teknolojia dia hoy izy:
Tena tsara miarahaba anao noho ny fandraisana anjara aho, nanompo ahy tsara izy io. Nosintomiko izy io ary nohamafisiko fa manana ireo programa ilaina napetraka ao amin'ny PointLinux ianao. Fizarana tena tsara mifototra amin'i Debian jessie. Manana solosaina finday misy karatra wifi usb sy karatra wifi anatiny aho.
- Nisintona ahy aho ary namoaka azy io
- Avy eo tantano izy ho mpampiasa root: ./create_ap create_ap wlan0 wlan1 vinotinto parangacutimiricuaro
- Novonoina ny fizotrany ary amin'izao fotoana izao dia efa manana fambara Wi-Fi amin'ny Internet ny finday avo lenta ... 🙂
Manantena aho fa manampy ny hafa ny hevitro. Misaotra anao.
Mamaly an'i tecnoforense
David fabry dia hoy izy:
Miasa volo amin'ny LXLE miaraka amin'ireo fonosana voalaza. Skrip tsara dia misaotra betsaka anao nizara
Valiny tamin'i David Fabry
Tsy afaka manomboka ny programa aho milaza izany amiko
root @ linux: / home / linux / create_ap # systemctl manomboka mamorona_ap
systemctl: baiko tsy hita
avy any tsy misy pass 🙁
Ny mpanjaka dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra ny fomba hitantanana ny isan'ny KB na MB izay omeko an'ireo izay mifandray amin'ny alàlan'ity script ity,
Valiny amin'ny The King
christlove dia hoy izy:
Miarahaba anao, nandramako tao amin'ny Debian Weezy ary mamorona ny AP ho ahy izy io fa rehefa manandrana manamarina amin'ny fitaovana android na amin'ny solosaina finday aho dia mila fotoana maharitra hahazoana ip ary amin'ny farany dia tsy manamarina ahy izany. Misy olona afaka manampy ahy ve.
Mamaly an'i christlove
Ianao ve nanandrana nanova ny fomba encryption an'ny AP?
Pedritin dia hoy izy:
Vaovao aho amin'ity ity misy ny rohy hampidinana ny script
Mamaly an'i Pedritin
Afaka namorona AP 2 niaraka tamin'ny Script aho. Azo atao ve ny mamorona AP mihoatra ny 2 miaraka amin'ity fitaovana ity?
Tsy haiko raha afaka, ny teboka eto dia ny fampiasana azo ampiharina amin'ny fanohizana ny famoronana APs, ny fananana AP virtoaly amin'ny fiakarana tsara dia mampihena ny fizarana hatramin'ny fizaranao ilay loharano.
Misaotra tamin'ny valinteninao David ...
Ny olana dia manao asa amin'ny virtualization aho ary mila manamarina ny fihetsika virtualization, amin'ny scenario miaraka amin'ny AP virtoaly mihoatra ny 2. Antenaina fa ny sasany aminareo dia manana vahaolana.
luisg595 dia hoy izy:
Rehefa mihazakazaka aho create_ap wlan0 eth0 MyAccessPoint MyPassword dia manome ahy ity lesoka manaraka ity:
Inona no mitranga?
Mamaly an'i luisg595
yoandri dia hoy izy:
Mampiasa manjaro 16 aho manome ahy ity lesoka ity raha misy olona afaka manampy ahy HADITRA: Tsy afaka mamindra amin'ny fantsona 36, ​​fantsom-pifandraisana 5GHz ny adaptatera anao.
Valio i yoandri
Mampiasa manjaro 16 aho rehefa mihazakazaka create_ap dia manome ahy ity lesoka ity ERROR: Ny adaptatera anao dia tsy afaka mamindra amin'ny fantsona 36, ​​fantsom-pifandraisana 5GHz.
Tsy hita eo amin'ny fametrahana azy ny fonosana dnsmasq
Valiny tamin'i Andrés Eduardo García Márquez
Beta2404 dia hoy izy:
tonga lafatra rehefa avy namaha ny voina roa tamin'ny fikirakirana izay nataoko teo aloha, nahavita nampiasa azy aho nefa tsy nanana olana lehibe
Ankehitriny dia mahazo Internet amin'ny karatro wifi anatiny aho ary mizara ny Internet amin'ilay karatra iray ihany amin'ny alàlan'ny antena hafa amin'ity iray ity (manana antennas roa izy, ao amin'ny rohy tp-wn851nd tp-rohy)
Valiny amin'ny Beta2404
Wasosky dia hoy izy:
Wow !!! gaga fotsiny fa valin'ny olako rehetra ary na amin'ny 2017 aza dia miasa 120%
Valiny tamin'i Wasosky
hipy dia hoy izy:
Salama, misaotra tamin'ny fandraisana anjara, vahaolana tena tsara hametrahana ny fako taloha izay ananan'ny maro amintsika. Fantatro fa somary efa antitra ity lahatsoratra ity saingy mbola manan-kery ho an'ny maro izy, tiako ho fantatra raha nisy olona teto nahavita nanao fifandraisana tamin'ny tambajotra izay manana mpizara proxy, avelao aho hanazava, efa manana AP miasa mahafinaritra aho saingy tsy afaka mizara ny fifandraisana internet ananako amin'ny mpizara proxy aho ary tsy te-handefa proxy hafa amin'ny AP. Raha nisy nahavita nanao zavatra nitovy tamin'izany ary afaka mizara ny zavatra niainany, dia tiako izany.
Mamaly an'i hipy
Yino dia hoy izy:
Salama tsara ary miarahaba ny rehetra, vaovao amin'ny tontolon'ny Linux aho, nametraka Linux Mint 19 ary efa nanome ahy ny olana voalohany izany ary tiako ho fantatra raha afaka manampy ahy ianao, mila mamorona fidirana na fantatra kokoa amin'ny hoe hotspot, fa avereno ny signal ary alao izy miaraka amin'ilay karatra wifi mitovy amin'ilay an-tariby na finday, izany hoe tsy misy tambajotra tariby satria tena tsara tamin'ny windows fa tsy nametraka rohy tpb hafa tp na hafa, tiako te hahafantatra ny fomba hahatratrarako azy azafady, satria mamela ahy hamorona tsara ny vilany fandraisam-bahiny fa tsy rehefa mampifandray amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby mba hisamborana signal internet, dia tapaka ny hotspot. Ankasitrahako ny fanampiana azon'izy ireo omena ahy. Miarahaba antsika rehetra. Raha tsy manao izay ataon'ny windows amin'izany lafiny izany i linux. minoa ahy fa ny Linux farafaharatsiny ho ahy dia tsy mandeha.
Valio i Yino
AHOANA NO NAMORANA NY SORATRA MAHASOA NY SPOTOTRA MAHASOA ??? ANDRAMO IZAO Ireto manaraka ireto:
create_ap -m tetezana wlan0 eth0 tambajotra 12345
systemctl mamela ny create_ap
Manantena aho fa hanampy anao ry namako
RFG dia hoy izy:
Mahazo ny lesoka mitovy amin'ny Yoandri_ aho
ERROR: ny adaptatera anao dia tsy afaka mamindra amin'ny fantsona 104, fantsom-pandrefesana 5GHz.
Valiny amin'ny RFG
Firefoxmania dia mandefa endrika vaovao ao amin'ny tranokalany
Hedgewars: klone of Worms tena tsara